DOWNLOAD Republic XP-47J avaperekedze experimental FSX & P3D & FS9 - Rikoooo
Akachinja 30-05-2015 19: 09: 31
Munyori: Milton Shupe, Tom Falley, Nigel Richards, Damian Radice, Thomas, Jan Visser
Anoshamisa Republic XP-47J nokuda FS2004, FSX uye P3D ndima ++
pasuru iyi zvinosanganisira 5 tsvarakadenga vane customized ukomba, era gauges, tsika ruzha, tsika ndege wokuenzanisira, uye 9 repaints.
Wedzerai-mberi pamuedzo FSX / Peace Maker / SP2 FS2004 uye anotendeuka kumhanya pasi P3Dv1v2. Chirongwa ichi chiri yakatsaurirwa kuyeuka mukupera Damian "Windrunner" Radice.
Musakanganwa kuverenga mabhuku emirayiridzo nemirayiridzo akapa nokuda hachishandi.
The otomatiki installer rinopindura dzishandise kuwedzera-pane izvi rimwe kana kupfuura simulators kamwe, aimbova FS2004 uye FSX.
Republic XP-47J avaperekedze experimental FSX & P3D & FS9 Download